ဝိုင် (အရက်) - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၆ ရာစုမှ ဝိုင်ညှစ်စက်
ဝိုင် ဆိုသည်မှာ ယမကာ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကဇော်ဖောက်ထားသော စပျစ်သီးမှ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တဆေး သည် စပျစ်သီးထဲမှ သကြားကို စုပ်ယူပြီး အီသနော၊ ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်ဒ်နှင့် အပူဓာတ်တို့ အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ စပျစ်သီး အမျိုးမျိုး နှင့် တဆေးမျိုးထူး အမျိုးမျိုးတို့မှ ဝိုင်စတိုင်လ် အမျိုးမျိုးကို ရရှိစေသည်။ ထိုသို့ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားရခြင်း အကြောင်းမှာ စပျစ်သီး၏ ဇီဝဓာတုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ ရှုပ်ထွေးသော ဩဇာတွဲဖက်မှုများ၊ ကဇော်ဖောက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သော ဓာတ်ပြုခြင်းများ၊ စပျစ်သီးစိုက်ပျိုးရာ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ စသည်တို့၏ ရလဒ်များပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် ဝိုင်၏ စတိုင်လ် နှင့် အရည်အသွေးကို သတ်မှတ်ရန် အတွင် တရားဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသော အမည်နာမ များ ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှ ပထဝီဆိုင်ရာ မူလရင်းမြစ် နှင့် ခွင့်ပြုထားသော စပျစ်သီး အမျိုးမျိုးကို ကန့်သတ်ထားသကဲ့သို့ ဝိုင်ထုတ်လုပ်မှု၏ အခြားသော အရာများကိုလည်း ကန့်သတ် ထားသည်။ စပျစ်သီးမှ ပြုလုပ်ထားခြင်း မဟုတ်သော ဝိုင်များတွင် အခြားသော သီးနှံများကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းတို့တွင် ဆန်မှ ပြုလုပ်ထားသော ဝိုင်နှင့် အခြားသော သစ်သီးများ ဖြစ်သော ဇီးသီး၊ ချယ်ရီသီး၊ တလည်းသီး၊ ဘယ်ရီသီးနှင့် အဲလ်ဒါးဘယ်ရီသီးတို့ကို အသုံးပြုကြသည်။
ဝိုင် အားချက်လုပ်ခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ဝိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ အစောဆုံးတွေ့ရသော အထောက်အထားမှာ ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ (ဘီစီ ၆၀၀၀)၊ အီရန် (ဘီစီ ၅၀၀၀) ၊  နှင့် စစ္စလီကျွန်း (ဘီစီ ၄၀၀၀) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ၌ ဝိုင်အများဆုံး ထုတ်လုပ်သော ဒေသများ ရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ အီတလီ၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြသည်။
ဝိုင်သည် ဘာသာရေးတွင် အရေးပါသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဝိုင်အနီးသည် ရှေးခေတ် အီဂျစ်တို့အတွက် သွေး နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။ထို့ပြင် ရှေးဟောင်း ဂရိတို့၏ ဒိုင်ယိုနီးဆပ်စ်ဂိုဏ်း နှင့် ရှေးဟောင်း ရောမတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ ရဟူဒီဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာတို့နှင့်လည်း ဆက်နွယ်လျက် ရှိသည်။
အာမေးနီးယားနိုင်ငံရှိ အာရန်နီ-၁ လှိုဏ်ဂူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံးဟု သိရှိသော ဝိုင်ချက်လုပ်ရာ ဖြစ်သည်။
ဝိုင်၏ အစောဆုံး လက်ရာများကို ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွင် ဘီစီ ၆၀၀၀ ခုနှစ်၊ အီရန် (ပါရှား)တွင် ဘီစီ ၅၀၀၀  နှင့် စစ္စလီကျွန်းတွင် ဘီစီ ၄၀၀၀ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရသည်။ ထိုခေတ်များမတိုင်မီက ဘီစီ ၇၀၀၀ ခန့်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ အလားတူ ယမကာမျိုးကို သောက်သုံးခဲ့ကြောင်းလည်း အထောက်အထားများ တွေ့ရှိရသည်။ ဝိုင်သည် ဘော်လကန်ဒေသသို့ ဘီစီ ၄,၅၀၀ တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်းဂရိ၊ သရေးရှား နှင့် ရောမတို့တွင် သောက်သုံး၍ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ဝိုင်အား ၎င်း၏ မူးယစ်စေသော သက်ရောက်မှုအတွက် သောက်သုံးခဲ့ကြသည်။.
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့ရှိ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ်ပြတိုက်မှ ဟင်းလျာ၊ကဇော်ဖောက်ထားသော ယမကာနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဇီဝမော်လီကျူး ရှေးဟောင်းသုတေသန စီမံကိန်းမှ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ပက်ထရစ် အီ မက်ဂါးဗန်း ဦးဆောင်သော သုတေသနမှ ဂျော်ဂျီယာသည် ဝိုင် စတင်မွေးဖွားရာ အရပ်ဖြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Ellsworth၊ Amy။ "7,000 Year-old Wine Jar"၊ University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology၊ 18 July 2012။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Tondo၊ Lorenzo။ "Traces of 6,000-year-old wine discovered in Sicilian cave"၊ 30 August 2017။
↑ Johnson၊ H. (1989)။ Vintage: The Story of Wine။ Simon & Schuster။ pp. 11–6။ ISBN 978-0-671-79182-7။
↑ Isis & Osiris။ University of Chicago။
↑ Keys၊ David။ "Now that's what you callareal vintage: professor unearths 8,000-year-old wine"၊ The Independent၊ 28 December 2003။
↑ Spilling၊ Michael; Wong၊ Winnie (2008)။ Cultures of The World Georgia။ p. 128။ ISBN 978-0-7614-3033-9။
↑ "Evidence of ancient wine found in Georgiaavintage quaffed some 6,000 years BC"၊ 21 May 2015။ 24 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 May 2015။
↑ Berkowitz, Mark (1996). "World's Earliest Wine". Archaeology 49 (5). Archaeological Institute of America.
↑ Castro-Sowinski၊ Susana (17 November 2016)။ Microbial Models: From Environmental to Industrial Sustainability။ Springer။ p. 42။ ISBN 9789811025556။
↑ Hames၊ Gina (2010)။ Alcohol in World History။ Routledge။ p. 17။ ISBN 978-1-317-54870-6။
↑ . Prehistoric China – The Wonders That Were Jiahu The World’s Earliest Fermented Beverage. Professor Patrick McGovern the Scientific Director of the Biomolecular Archaeology Project for Cuisine, Fermented Beverages, and Health at the University of Pennsylvania Museum in Philadelphia. Retrieved on3January 2017.
↑ BAC per Drink tables။
↑ Effects At Specific B.A.C. Levels။7June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Georgia is cradle of wine, confirms international study။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝိုင်_(အရက်)&oldid=735966" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။